Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Oo Hanjabaad Kulul U Jeediyay Warbaahinta Muqdisho – Hornafrik Media Network
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Gudaha Oo Hanjabaad Kulul U Jeediyay Warbaahinta Muqdisho
Afhayeenka Wasaaradda amniga gudaha Cabdi Casiis Cali Ibraahim Cabdi Casiis Xildhibaan ayaa u hanjabay qaybaha kala duwan ee Warbaahinta ka hawlgasha Magaalada Muqdisho.
Cabdi Casiis Xildhibaan oo inta badan aanan ka fiirsan hadalada uu ugu goodiyo Suxufiyiinta iyo Bahda Warbaahinta ayaa markaan wuxuu sheegay in aanan la baahin karin wararka la xiriira Xarakada Al Shabaab.
Al Shabaab oo Somaliya ka dagaalanta ayaa marka loo eego dhanka Saxaafadda waxa ay yihiin ilo wareed la soo xigan karo wararkooda iyadoo aanan aad loo buun buunin balse la sheegaayo ficilada qaar ay sameeyaan.
Afhayeenka Wasaaradda amniga ayaa sheegay in Wararka la xiriira Xarakada Al Shabaab Idaacadaha aysan baahin karin isaga oo ugu goodiyay Suxufiyiinta inay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay baahiyaan Wararka Shabaab la xiriira.
Hadalkaan ayuu sheegay xilli uu la hadlaayay Warbaahinta isaga oo u muuqday mid ku jees jeesaya bahda Saxaafadda uguna goodinaya awooda ah inuu ka mid yahay Wasaaradda amniga dalka.
Cabdi casiis Xildhibaan oo dadka ay si wayn u garanayaan ka hor afhayeenka Wasaaradda amnigana uu si wayn u dhaliili jiray dowladda ceebaheedana soo bandhigi jiray ayaa kadib magacaabistiisa Afhayeenka Wasaaradda amniga dalka bilaabay handadaada Suxufiyiinta.
Qaar ka mid ah Warbaahinta ka hawlgasha Magaalada Muqdisho ayaa baahiyay codka Afhayeenka Xarakada Al Shabaab Cali Dheere oo ka hadlaayay khilaafka u dhaxeeyay Abuu Mansuur iyo Shabaab iyo sababihii keenay isku dhacooda